AutoDesk, ESRI iyo Manifold ee CalGIS 2009 - Geofumadas
Abriil, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GIS kala cayncayn ah
Ma ahan la yaab in la arko AutoDesk iyo ESRI shirka sanadlaha ah ee Systems Information Geographic ee California, maxaa yeelay, iyagu waa dahab kafaala (ie greenbacks 5,000 dabacsan sannad kasta), laakiin ulana yaabay arko in kala cayncayn ah ayaa cuduradaas oo sidoo kale soo bandhigay of 22 April 2008 ka hor shirka.
ESRI waxay soo bandhigi doontaa talooyin iyo qalab si kor loogu qaado wax soo saarka iyada oo la adeegsanayo ArcGIS 9.2. Mawduucyada la filayo in la daboolo waa:
Talooyin ku saabsan la shaqeynta faylasha Excel iyo ArcMap
La shaqeynta xogta CAD
Maareynta khariidadaha, lakabyada iyo qaababka "muuqaalka qarsoon"
Tricks to save time ee kartoonka iyo isticmaalka calaamadaha
Talooyin ku saabsan dhoofinta iyo daabacaadda ArcMap
Dhamaan su'aalaha iyo jawaabaha
Isticmaalayaasha ESRI waxay dhihi doonaan: Wow!
kuwa ka yimid AutoDesk: khariidado qurux badan oo qurux badan leh
kuwan oo kala ah: whta's price !!! ????
AutoDesk wuxuu soo bandhigi doonaa codka Jeremiah McKnelly xalalka AutoCAD ay ka bixiso deegaanka GIS. Mawduucani wuxuu diirada saarayaa adkeysiga ah AutoDesk si uu u helo dhul beerta GIS, isku dayaya in dadka isticmaala ay ka jawaabaan su'aasha ah ee ESRI na haysato mazacuateados: Waa maxay sababta ay muhiim u tahay in si qaas ah looga shaqeeyo CAD, ka dibna u gudbin GIS, iyo in dib loogu eego CAD?
Hadda oo AutoDesk ayaa horumar yar (aan wax badan in la yidhaahdo) in la siiyo awoodaha in AutoCAD ee maaraynta isku xirka nidaamka, análisi mowduuc, xogta aan ollogga free Oracle, Server SQL oo ArcSDE, sannadaha wiil 25 ku dhaca in uu na ka doodid si ay u imtixaanka in saxnaanta codsigaaga aad kasban kartaa sharraxaadda ArcGIS aan u dhimanayaan in isticmaalka xasuusta.
Hannaanka GIS wuxuu u socdaa socodka, khibradaha iyo casriyeynta loogu talagalay 2009 oo ay soo bandhigtay hay'adaha AutoDesk ee degaanka California
Macaamiisha maxaliga ah ee hirgeliyey xalalka geospatial ee ka yimid AutoDesk waxay wadaagaan faa'iidooyinka iyo madax xanuun.
Hordhaca AutoDesk iyo istaraatejiyadeeda si ay u taageerto Foundation Open Geospatial Foundation
Kuwa ka yimid AutoDesk waxay odhan doonaan: Wanaagsan!
kuwa ESRI: mmm, xiiso leh, miyaad ku dari kartaa?
kuwa Manifold: goorma ayay tahay?
Iyo in la bilaabo keenista khaladaadka, kala cayncayn ah sneaks muuqaalkan ku dheehan tahay codka iyo macnaha Robin M. Wood.
Laakiin kala cayncayn ah oo doonaya in la maqlo, oo waxa uu loolan dadka si ay u fuliyaan aad laptop, waxay yeelan doonaan heli karaa shabakad wireless, user mid kastaa wuxuu heli doonaa ruqsad ku meel gaar ah, waayo, kala cayncayn ah 8 in purebe nool oo toos ah.
Meelku xaddidana mawduucuna waa:
Bandhigga guud Manifold, si dhakhso ah u eeg waxa ku jira sanduuqa $ 245
Ku rakibida Manifold
Tilmaamaha ku saabsan isticmaalka user
Xidhiidhinta macluumaadka xogta iyo soo dejinta xogta (oo caddayn kuwa doonaya inay ka doodaan, maadaama ay soo dejinayaan muuqaalo iyo shaqaale xogogaal ah)
Miisaaniyada iyo weydiimaha
Khariidadaha daabacan ee adeegyada IMS
waa ... waxay siin doonaan qalab buuxa oo ay ku jiraan fiidiyowyada waxbarasho.
Kuwa ka mid ah Manifold waxay odhan doonaan: ohhhhhh !!!!
kuwa ka yimid AutoDesk: mmm, waa Manifold?
kuwa ESRI: raali gelin, miyaad sheegtey $ 245 ???
Anyway, tani waxa keliya bandhigay ee preconference ah, sidaa darteed haddii aad tahay qof u dhow California, ama waxaa laga yaabaa in ... socdaan ahaan lahayd socday dhacdo in 13 sano oo isku xigta ayaa muujisay sida ugu fiican ee isbeddellada haya ee technology GIS ... malaha maalin uun waxaan arki doonaa wax badan oo ka mid ah beddelaadyo lacag la'aan ah
Post Previous«Previous ArcGIS Explorer, oo aad u la mid ah Google Earth laakiin ...
Post Next Dhiirigelinta toosan oo leh rabitaan wanaagsan si aad u gaarto HispanicsNext »
Ka jawaab Jawaab "AutoDesk, ESRI iyo Manifold on CalGIS 2009"